संसारमै सबैभन्दा राम्रो अक्षर लेख्ने सबिना जसको आवाज पनि जादु मय छ ! हेर्नुहोस भिडियो सहित ! - PanchKhal Online
Home/भिडियो/संसारमै सबैभन्दा राम्रो अक्षर लेख्ने सबिना जसको आवाज पनि जादु मय छ ! हेर्नुहोस भिडियो सहित !
संसारमै सबैभन्दा राम्रो अक्षर लेख्ने सबिना जसको आवाज पनि जादु मय छ ! हेर्नुहोस भिडियो सहित !
काठमाडौँ – यिनी हुन् सबिना मगर। कम्पुटरले प्रिन्ट गरे जस्तो उत्कृस्ट अक्षर लेख्ने क्षमता भएकी नेपाली बालिका। अक्षर त हर कोहि लेख्छन तर कम्प्युटरको जस्तो एकनास र उत्कृस्ट लेखन गर्न सक्ने मानिस बिरालै भेटिन्छन।
यी बालिकाको अक्षर देख्दा हर कोहि मोहित हुने गर्छ। अक्षर पनि यति राम्रो छ कि हेर्ने जो कोहि पनि यस्तो अक्षर लेख्ने क्षमता ममा भै दिए हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गर्छन।उनि जति राम्रो लेख्छिन तेती नै राम्रो गीत पनि गाउछिन। अहिले सबिना मगर समता स्कुल मा अध्ययन गरिरहेकी छिन।
सुरु देखिने आफ्नो अक्षर राम्रो नभएपनि पछि आफ्नो अक्षर राम्रो बनाउन निकै मेहेनेत गरेको बताइन। सकेको बढी निरन्तर लेखिरहने गरेको कारण र राम्रो बनाउने आफ्नो प्रयास का कारण यस्तो सम्भब भएको बताउछिन। आफुले किताबमा भएको अक्षर अनुसार हेरेर जस्ताको तस्तै बनाउने प्रयास गरेर सम्भब भएको सबिना बताइन।
कम्जोर आर्थिक अबस्थाका कारण अहिले उनि समता स्कुल मा पढीरहेको बताउछिन। प्रतिभा हरेक मानिसमा हुन्छ तेस्लाई खोज्नु पर्छ भन्ने यी नानीले साबित गरिदिएका छन्। किताबमा लेखिने धेरै हालको लिपिमा उनि लेखेर सिक्ने प्रयास गरेर सफल भएको उनि बताउछिन।-थप हेर्नुहोस भिडियोमा
स्व. राजा बिरेन्द्रको बिवाहको दुर्लभ भिडियो, हात्तिको बग्गीमा स्वर्गिय राजारानी
दुबै हात नभएकी मेघा घिमिरेको कथा सुन्दा कृष्ण वोली र प्रदिप खड्काको आखामा आशु ! (भिडियो)